NY REFORMASIONA (Lahateny nataon'i Filohan'ny FLM tao Antsahamanitra Antananarivo) | Fiangonana Loterana Malagasy
FAMPIANARANA / FANENTANANA
NY REFORMASIONA (Lahateny nataon’i Filohan’ny FLM tao Antsahamanitra Antananarivo)
by admin9082 · 10 juillet 2017
Toa zavatra efa navalon’ny tantara ny REFPORMASIONA? Misy aza efa tsy mihevitra mihitsy akory ny atao hoe REFORMASIONA fa difotry ny fahasahiranana na sempotry ny rivotry ny fanatontoloana?
Feno 500 taona katroka anefa ny REFORMASIONA izao ary tena mbola tsy lefy laza ho an’ireo izay mihevitra ny maha sarobidy ny asan’i Jesosy eo amin’ny fiainany! Mitondra sy mifehy ny tantara, ny fiainantsika manontolo Jesosy. Isaorantsika an’i Jesosy izany! Tsy fahatsiarovana ny lasa fotsiny no atrehintsika androany fa fampiainana antsika ny asan’i Jesosy eo amin’ny fiainantsika isan’andro!
Marobe araka izany no zavatra ho azo resahina, nefa tsy fanehoana fahalalana ambony sy fahalalana maro no ataontsika eto fa fandraisantsika anjara amin’ny fiainan’ny fiangonana araka izay nanoloran’i Jesosy izany ho antsika! Noho izany dia nisafidy ny hanazava fohy ireto lafin-kevitra ireto aho mandritra izao famelabelarana izao: Voalohany, tantara tsotra; faharoa, ny Reformaasiona sy ny fiombonam-piangonana; fahatelo, ny Reformasiona sy ny toe-karena; fahafetra, ny Protestanta miaina ny Reformasiona ankehitriny.
Pastora Dr Martin LOTERA no mpitarika ny Reformaasiona. Teraka tamin’ny 10 Nov. 1483. Natao batisa tamin’mny 11 Nov. 1483. Naniry mafy ny rainy mba ho tonga mpiasam-panjakana ambony i Martin Lotera. Hafa anefa no lalana nitondran’i Jesosy azy. Tonga Pretra izy rehefa avy nahazo fiofanana tsara tao amin’ny fitokana-monina na Monka tao amin’ny antokon’ny Aogostiniana.
Tena tsy sitrapony izany fa fitarihan’ny Fanahy Masina feno. Tamin’ny fitarihana ny Reformasiona nataony izay hita fa tena sarotra sy nihatra amin’ny aina mihitsy dia nilaza mazava Martin LOTERA fa sady misy mitarika azy eo aloha no misy manosika azy avy ao aoriany. Jesosy mitondra ny fiainany no ambarany amin’izany!
Sady Mpampianatra tao amin’i Oniversiten’i Wittenberg no nitondra ny fiangonana tao Wittenberg Dr Martin LOTERA no voantso hitarika ny REFORMASIONA. Tamin’ny fitarihany ireo mpianatra mpanao fikarohana tao amin’ny Oniversiten’i Wittenberg dia efa nanomboka tany amin’ny taona 1515 ireo lahatsoratra navoakan’ny mpianatra notarihiny nanomboka nitsikera ny fomba fitondram-piangonana notarihin’ny Papa tany Roma. Nivoitra sahady tany amin’ny lahatsoratry ny mpiantara ny fandavana ny asan’olombelona ahazoana famonjena sy izay rehetra mety ho filana sitraka tamin’Andriamanitra.
Lotera tenany dia niaina ny fampijalian-tena sy ny asa fivalozana rehetra ary izay rehetra atao hoe ho nahafaly an’Andriamanitra fa tsy nahita sitraka tamin’izany. Ny fiainany ny alahelo sy ny fahoriana vokatry ny ota sy ny fahatezeran’Andriamanitra manoloana izany no navesatra teo amin’ny fiainany sy nitadiavany ny fomba hialana amin’izany.
Ny Fanahy Masina niasa mahery tao aminy no nampitombo ny fitiavany ny Tenin’Andriamanitra ka nanokanany fotoana betsaka nandinihany ny Soratra Masina. Nanana toerana manokana tamin’izany ka tonga filamatry ny REFORMASIONA ny fandinihany sy ny fianany ny bokin’i Romana. Fa fototra sarobidy nialoha izany ny filofosany nandinika sy niaina ny Salamo. Singanina manoka amin’izany ny Salamo faha-51 misy ny Salamo FIBEBAHANA! Tena nianan’i Dr Martin LOTERA izany FIBEBAHANA izany fa tsy nampianariny fotsiny. Amin’izany indrindra no iresahana ny REFORMASIONA: Fanavaozana ataon’ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika tsirairay sy ny fiainan’ny fiangonana ary ny fiainam-pirenena mihitsy.
Koa tsy fanavaozana araka izay ihevran’ny maro azy, indrindra amin’izao andron’ny fanatontoloana izao io FANAVAOZANA io fa tena asan’ny Fnahy Masina noho ny herin’ny Tenin’Andriamanitra mpanavao.
Tsy fanitsiana ara-pivavahana araka izay ahatakaran’ny saintsika azy fotsiny koa ny REFORMASIONA fa fampiverenana feno amin’ny hery sy fahefan’ny Tenin’Andriamanitra izay nosoloana ny fahendren’olombelona sy ireo lovantsofina maro ka nanimba ny fiainan’ny fiangonana! Fandinika lalina izany amin’izao faha-500 taonan’ny REFORMASIONA izao? Noho ny fanatontoloana dia miha mahazo laka hatrany ny filozofia na ny fahendren’ ololmebona. Noho ny olana ara-toekarena dia hita ho miditra tsikelikely koa ny fomba amam-panao izay mifanohitra amin’ny Soratra Masina?
REFORMASIONA: Fiainana ny fiainam-pifohazana marina, miorina amin’ny Soratra Masina, mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra mandrakariva. Manavao ny fifandraisantsika amin’i Jesosy ny Teniny sy ny Sakramenta Masina. Manavao ny fomba fifandraisantsika samy olombelona ny hery sy ny fahefan’ny Tenin’Andriamanitra: na ny fifandraisantsika amin’ny tenatsika izany na ny fifansdraisantsika amin’ny hafa. Manavao ny fifandraisantsika amin’ny zavaboahary manodidina antsika koa izany!
Reformasiona: Tsy izay nataon’i Jesosy tamin’ny tanjato faha-16 ihany fa izay ataony amintsika Malagasy ankehitriny koa noho ny herin’ny Teniny sy asany eo amin’ny FFPM sy ny firenena manontolo!
Tsara ny manamarika fa tsy nandositra na niala tao amin’ny fiangonana Katolika Apostolika Romana izy tamin’izany fa nitady ny hevitra hitondrana ny fanavaozana ny fiangonana. Voaroka anefa izy na koa hoe Ex-communie. Tsy naniry hanorina fiangonana vaovao izy ary tsy nekeny akory ny hitondran’ny fiangonana ny anarany. Tsy izaho no maty teo amin’ny hazofijaliana fa Jesosy, hoy izy. Ny fanenjehena nihatra tamin’ny fiangonana izay nanaraka azy anefa no nanesoana azy ireo tamin’izany ka nilazana hoe: LOTERANA. Dia raikitra sy tavela mandrak’ankehitriny izany anarana izany! Tonga anarana sarobidy sy sarotra hafoy!
NY REFORMASIONA SY NY FIOMBONAM-PIANGONANA
Araka izany dia tsy toe-tsain’ny Reformasiona ny toe-tsain’ny fisarahana. Samy nanao ezaka fifampidinihana daholo na ny samy mpitarika ny Reformasiona na ny Protestanta sy ny Katolika Romana.
Tsy nandeha irery Dr Martin LOTERA fa nisy fisehoan-javatra maro nifamatotra tamin’ny Reformasiona notarihiny. Isan’izany ny fiforonan’ny fiangonana tsy niankina amin’ny tany Roma fa nanana ny maha izy azy ny fiangonana tany Angletera izay loharanon’ny Anglikanisma. Tsy nisy fifandonana ara-pampianarana tamin’ny Papa tany Roma fa nanana ny fahaleovatenany kosa ara-pitondrana.
Mpitarika ny Reformasiona ngezalahy sy nalaza koa ry Jean Calvin sy ry Zwinlgy izay rain’ny fiangonana Reforme.
Na dia samy Reformatora izy ireo dia samy nanana ny fampianarany. Noezahana hatrany anefa ny nifampidinika sy nifanakalo hevitra.
Mbola ezaka lehibe mandraka ankehitriny ny ezaka Ekiomenika. Ary na tsy ho resaka fiombonana ho fiangonana tokana aza dia misy ezaka lehibe ny fiaraha-miasa! Irintsika mba tsy ho ezaka atao amin’ny fomba ivelany izany fa hanomezana vahana ny fihainona tsara ka ahazoana mazava ny hafatry ny Tenin’Andriamanitra izay miantoka ny fahavelomantsika!
Samy manandratra avo izany FIOMBONANA izany na isika eto Madagasikara na ny sehatra iraisam-pirenena. Izany no antom-pisian’ny COE na ny Fiombonan’ny fiangonana erantany; ny fisian’ny fianakaviamben’ny Reforme manerana izao tontolo izao ary ny Fiombonan’ny Fiangonana Loterana Erantany. Vao avy nanatanteraka ny AG faha-12 tany Windhoek, Namibia izahay izao tonga eto izao.
Vokatry ny dinika tsy nitsahatra teo amin’ny EKAR sy ny Loterana dia efa vita sonia tamin’ny 31 Oktobra 1999 tany Aogsborga ny FANAMBARANA IOMBONANA momba ny fampianarana ny FANAMARINANA amin’ny FINOANA.
Natao tany Lund, Suede ny fiaraha-mankalaza ny faha-500 taonan’ny Reformasiona teo amin’ny EKAR sy ny Loterana, tamin’ny 31 Okt 2016 ka ny Papa Francois sy Dr Munib Yohanan Filohan’ny FFLET, teo aloha no niaraka nanao sonia izany.
Marihina fa na dia eo amin’ny samy Loterana aza dia be tokoa ny fahasamihafana rehefa samy mizara ny maha izy azy ny Loterana eran’izao tontolo izao. Tsy vato misakana ho an’ny fiombonana sy ny fiaraha-miasa amin’ny FITIAVANA anefa ny fahasamihafana. Ny hasarobin’ny hazofijaliana sy Jesosy izay nohomboana teo no mampiray antsika bebe kokoa!
Makalaza ny faha-500 taonan’ny REFORMASIONA miaraka ny FFPM anio, 21 may 2017, eto Antsahamanitra, dia ambara mazava fa voantso hiara-miasa amin’ny fitiavana marina sy ny firahalahiana tokoa isika eo ambany fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra mamelona antsika! Tsy ny lafiny fiainam-pinoana ihany izany fa ny lafiny sosialy sy toe-karena indrindra koa!
Tsy voantso hanasoa ny tenantsika ihany isika fa voantso hanasoa ny fiombonana eto anivon’ny fiangonana sy ny firenena manontolo!
NY REFORMASIONA SY NY TOE-KARENA ARY SOSIALY
Tsy azo lazaina fa fanitsiana ara-pivavahana ihany no nentin’ny REFORMASIONA fa nisy vokatra lehibe ara-toe-karena sy sosialy izany. Koa ny fiangonana zanaky ny Reformasiona dia tsy maintsy maneho ny fiainany feno fampivoarana ny toe-karena sy sosialy koa.
Ohatra velona ny fiainan’i Martin Lotera mivady. Lehilahy sy vehivavy nahantra fadiranovana, navoaka ny Monastera Martin Lotera sy Rtoa Katarina Von Debora no nivady. Tokatrano niainga tamin’ny tsy misy fa tanam-polo tanteraka! Tokatrano nanomboka tamin’ny FAHANTRANA tokoa. Tokatrano niorina tamin’ny FINOANA, Tokatrano velona tamin’ny Tenin’Andriamanitra. Tokatrano niankina tamin’ny Soratra Masina irery ihany!
Tonga tokatrano namiratra sy filamatra eran’izao tontolo izao. Nahavelona ny zanany sy nitaiza ary nanabe tanora maro, niainga avy eo ankohonany Martin Lotera sy Katarina Von Debora. Nanana lapasoa tsy mena-mitaha amin’ireo lapan’Andriana maro tamin’izany fotoana izany! Nampandroso ny toe-karena tamin’ny alalan’ny soratra sy ny fanaovam-pirinty ka nampiely eran’izao tontolo izao ny asa soratra vitany. Mpanoratra ngezalahy sy fatadaza rahateo izy ary nahaliana sy mahaliana ny maro mihitsy ny asa sorany. Nitondra vokatra sarobidy teo amin’ny toe-karena izany.
Nampivelatra ny fiainan’ny tantsaha teo amin’ny tontolo ambanivohitra. Isan’izany ny fanomezana lanja ny FANABEAZANA ho kitro hifaharan’ny fampandrosoana!
Tsy ataontsika mahagaga raha ny tontolo ambanivohitra no isan’ny maha maro an’isa ny Loterana eto Madagasikara.
Tsy natao ho tontolon’ny fahantrana anefa izany fa tena kitro ifaharan’ny FAMPANDROSOANA mihitsy! Vao maika hitondra fampandrosoana bebe kokoa ny fifamenoan’ny Tontolo ambanivohitra sy ambonivohitra. Tena fifamenoana lehibe no misy eto amin’ny FJKM sy ny FLM na isika FFPM miatrika ny FAMPANDROSOANA ARA-TOE-KARENA sy sosialy.
NY PROTESTANTA MIAINA NY REFORMASIONA ANKEHITRINY
Tsy hoe hamerina ny tantara ka hiaina ny fiainana tany amin’ny taon-jato faha-16 isika. Tsy hitady hamerina hiainana ny olan’ny taon-jato faha-16 isika. Fa manatsoaka lesona sarobidy tamin’ny fiainana sy ny fampianaran’i Dr Martin Lotera sy ireo mpitarika ny Reformasiona isika.
Fivelomana amin’ny Tenin’Andriamanitra. Fiarovana ny fampianarana marina araka ny Soratra Masina. Tsy manaraka ny onjan’ny fanatontoloana sy ny tolotra maro eto amin’izao tontolo izao izay miezaka hifehy izao tontolo izao eny hisolo ny toeran’Andriamanitra mihitsy aza!
Mandray anjara mavitrika amin’ny famahana ny olana ara-toekarena, sosialy sy tontolo iainana mba ho azo tsapain-tanana sy hita maso ireo FAMPANDROSOANA ny fiainam-bahoaka, mampiaina ny FAHAMARINANA na ara-tSosialy na araka ny didin’Andriamanitra rahateo!
Ireo asa marobe ataontsika FFPM dia mila hampiroboroboina sy hitarina hatrany! Nahavita nanomboka sy nampaharitra ireny ireo ray aman-dreny nifandimby tany aloha. Manana adidy lehibe isika hanao mihoatra noho izay efa vitan’izy ireo. Mila fiaraha-miasa matotra sy matanjaka izany. Ary tsorina fa tsy vitantsika irery izany ka ilantsika tolo-tanana amin’ireo fiangonana rahavavy koa aza. Mbola maro ireo sehatra asa hita fa tokony handraisan’ny fiangonana anjara amin’ny fijoroana ho vavolombelona. Fandaminana no ilaina dia sokafana ny fiaraha-miasa aamin’ny namantsika!
Misaotra an’i Jesosy isika nahazo izao Alahadin’ny FFPM ankalazaintsika miaraka eto Antsahamanitra izao. Nifanojo amin’izao faha-500 taonan’ny REFORMASIONA izao izany. Fanomezana manokana avy amin’i Jesosy izao ananantsika ny taon-jobily izao. Koa isika zanaky ny Reformasiona rehetra no hiaraka hitsangana. Voalohany hanandratra avo ny Tenin’Andriamanitra ka tsy ho soloana zavatra hafa na inona inona inona izany. Hoy isika miaraka amin’ny Rain’ny Reformasiona rehetra: SORATRA MASINA IRERY ihany!
Lazain’i Paoly ao ami’ny Rom.10:17 fa ny FINOANA dia avy amin’ny Toriteny, ary ny Toriteny dia avy amin’ny Tenin’i Kristy. Ambarantsika mazava koa ary araka ny maha zanaky ny Reformasiona antsika fa FINOANA IRERY ihany! Tsy amidy, tsy atakalo izany fa lovantsika tena sarobidy, naharitra izay 500 taona izay! Mbola izany no ho entintsika mamaky vaky ny andro ho avy iandrasantsika an’i Jesosy. Tena miasa amin’ny FINOANA isika miandry ny fihavian’i Tompo Jesosy! Maro ireo ambana misakana antsika eo aloha amin’izany dian’ny mpivahiny izany, Nefa aza matahotra fa hoy Jesosy: Ampy ho anao ny FAHASOAVAKO! II Kor.12:9. Ambany FAHASOAVANA mandrakariva isika, Rom.6:14-15. FAHASOAVANA IRERY ihany hoy ny antson’ny REFORMASIONA!
Ireo fototra saorbidy ireo no iorenena sy ijoroan’ny REFORMASIONA efa 500 izao ary mbola hitohy amin’ny taon-jato maro mifandimby!
Handray anjara mavitrika isika FFPM amin’ny fiatrehana ny vanim-potoanantsika sy ny hametraka lova tsara koa ho an’ny andro ho avy.
Misy asa maro tena miandry antsika na eto an’ivon’ny FFPM na eto an’ivon’ny FIRENENA.
Fotoana mety izao hanaingana indray ny herin’ny FFPM hamita ny iraka lehibe anirahan’i Jesosy Lohan’ny Fiangonana antsika sy hanandratantsika avo ny lovan’ny REFOMASIONA amin’izany!
Next story 06 Jolay – 12 Jolay 2017- Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny faha-500 taonan’ny Reformasiona tany Wittenberg (Allemagne) ny Delegasiona Loterana Malagasy notarihin’ny Filoha FLM.
Previous story RAFITRY NY FLM
Aza adinoina ny mi J’AIME ny pejy
Ny finoana mamoa voa tsara Past Dr RABENOROLAHY Benjamin, 17 December 2017
Ny fibebahana Past Dr RAKOTONIRINA David, 17 December 2017
Noafahan’ny Fahasoavan’Andriamanitra Past Dr RASOLONDRAIBE Peri, 16 December 2017
Romana 3.21-24 16 December 2017
FLM mamoa voa tsara vokatry ny Fibebahana Past Dr LAHIVELO Barson, 16 December 2017
Fiangonana Loterana Malagasy © 2019. All Rights Reserved.